Ndi Omuma Kwesịrị Takekwụsi Ike na Okwu Ọha? | Martech Zone
N'ụtụtụ a, agbataghị m akara na Facebook. N'ime afọ gara aga, mmelite ha dabara na mwakpo ndọrọ ndọrọ ọchịchị, achọghịzi m ịhụ ụdị adịghị ike ahụ na ndepụta m. Agwapụrụ m echiche m banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo ọtụtụ afọ. Ọzọkwa. Anọ m na-ele anya ka ndị na-eso m gbanwere ka ọtụtụ ndị kwenyere m ebe ndị ọzọ na-ekwenyeghị ekwenyeghị na ya.
M àmà ụlọ ọrụ m na-courting pụọ pụọ na-arụ ọrụ m, mgbe ndị ọzọ na ụdị mekwuo ha njikọ aka m. Mara nke a, o nwere ike iju gị anya ịmata na agbanweela m echiche na atụmatụ m. Imirikiti mmekọrịta mụ na ndị mmadụ bipụtara na-akpali mmụọ ma na-metụtara ụlọ ọrụ karịa ịkpa mmekọrịta ọha na eze na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ihi gịnị? Ọ dị, n'ihi ihe ole na ole:
Ana m asọpụrụ ndị nwere echiche ndị ọzọ ma achọghị m ịchụpụ ha.
Nkwenkwe nke onwe m anaghị emetụta etu m siri emeso ndị m na - ejere ozi… Gini mere o jiri hapụ imetụta azụmahịa m?
Ọ dịghị edozi ihe ọ bụla belụsọ ịgbasa oghere dị elu karịa ịhazi ha.
Nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù na nsogbu mmekọrịta mmadụ nwụrụ na soshal midia. A na - eji mwakpo ọjọọ na - agagharị ma na - eme mkpọtụ mgbe a na - ekpughe ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ na ndị mmadụ ghọtara ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbachitere ma ọ bụ arụmụka ọ bụla na-agbadata ngwa ngwa ma ọ bụ ịkpọ aha ndị ọzọ. Ma m na-ezighị ezi? Ihe omuma a gosiputara ihe omuma nke otutu ndi ahia ekweghi ma kwenye na ndi ozo kwesiri ikwenye ma kwue okwu banyere nsogbu ndi mmadu.
Akwụkwọ akụkọ Havas Paris / Paris Retail Week Shopper Observer kpughere ọnọdụ atọ nke pụtara ìhè na-agbanwe mmekọrịta dị n'etiti ụdị na ndị ahịa France:
Imu kwere na ọ bụ ugbu a ọrụ nke ika iguzo na nsogbu ndi obodo.
Ndị na-eri ihe chọrọ ịbụ onwe ụgwọ ọrụ site na ụdị ha na-arụ ọrụ.
Ndị ahịa na-achọ ngwaahịa ka ha dị ma ọnlaịnụ na n'ịntanetị.
Ikekwe echiche m dị iche n'ihi na m na-erute afọ iri ise. Ọ dị m ka enwere esemokwu na data ebe naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa chọrọ ụdị ka ha nwee ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'agbanyeghị nsogbu ọ bụla metụtara mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ekwenyeghi m na m choro icho ahia nke na-ekwuputa uzo ya na nsogbu ndi mmadu. Kedu maka esemokwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-ekewa ndị na-azụ ahịa? Echere m na nkwupụta mbụ nwere ike ọ dị mkpa ka edegharịrị:
Ndị ahịa kwenyere na ọ bụ ọrụ dịịrị nke ika iji were ọnọdụ n'okwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya… ọ bụrụhaala na akara a kwekọrịtara na ndị na-azụ ahịa otu esi emeziwanye ọha mmadụ.
Enweghị m nsogbu na ụlọ ọrụ ọ bụla na-akwado nsogbu ọha mmadụ, mana enweghị m ike ịjụ ma ọ bụrụ na ị ga-eji nkwụghachi ụgwọ maka ụdị iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụ taa ha ahụhụ maka echiche ha. Ọtụtụ nsogbu ọha na eze bụ nke onwe, ọ bụghị ebumnobi. Nke a adighi m ka oganihu nye m - o yikwara ka o na-akpagbu ndi mmadu. Achọghị m ka ndị ahịa m manye m iguzo, were ndị ọzọ kwenyere m, ma jeere naanị ndị na-eche otu ihe ahụ ozi.
Enwere m ekele maka iche iche echiche karịa iche-n'otu. Ekwenyere m na atụmanya, ndị ahịa, na ndị na-azụ ahịa ka chọrọ ma chọọ mmetụ mmadụ aka karịa nke akpaghị aka, ma ha chọrọ ka ndị ọrụ ha na-akwụghachi ụgwọ ma ghọta ha nke ọma.
Yabụ, ọ bụ mkpebi m na arụmụka a?
Shopper Observer Ọmụmụ, N'etiti AI na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mkpa ọ dị mmadụ maka ndị na-azụ ahịa, nke Paris Retail Week na mmekorita ya na Havas Paris duziri.
Tags: brandmbọnHava ParisAhịa na-adịghị n'ịntanetịParis Retail Izu Iche ahịa Observerndọrọ ndọrọ ọchịchịụlọ ahịa mkpọsaụlọ ahịa ịzụ ahịaJerikoụgwọ ọrụnsogbu mmekọrịtammekọrịta mmadụ na ibe ya
Mee 25, 2017 na 2: 08 PM
Ka ọ dị na mbụ. Ezigbo ihe. Ekwenyere m, na nkwupụta gị gbanwere nke ihe ndị ahịa chọrọ. Ekwenyekwara m na a ga-ata ndị ọzọ ụdị akara ahụhụ n'ihu ọha maka ọnọdụ ha, mana dollar nwere ike ịkwado ha site na ndị ahịa ndị ọzọ kwenyere na nzuzo.
Mee 30, 2017 na 12: 09 PM
Isi okwu abụọ sitere na edemede gị nke chịkọtara ihe m chere na isiokwu a, "Ọtụtụ nsogbu mmekọrịta ọha na eze bụ nke onwe, ọ bụghị ebumnobi" & "Enwere m ekele maka echiche dịgasị iche iche karịa iche-iche". Echere m na ọtụtụ n'ime ndị ahụ nwere oke nghọta anaghị aghọta na echiche ha bụ nke ahụ, otu echiche, na ha enweghị ike ma ọ bụ na ha agaghị ege ntị n'echiche ndị ọzọ iji gbasaa mbara igwe ha. Ekwenyesiri m ike na ọ dịghị ụlọ ọrụ kwesịrị ịkwado mkpebi ha n'okwu ndị a, ma ọ bụ na ha ga-eche ihu azụ n'ụzọ ọ bụla. Dịka ụlọ ọrụ, m ga-ekwupụta na m nwere ndị ọrụ nwere echiche dị iche na ọnọdụ m na m kwụ n'azụ nnwere onwe nke echiche na ịkwado ndị ọrụ si n'akụkụ niile na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.